Torres Bus SL dia tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana ny mombamomba ny mpampiasa an'ity tranonkala ity. Isika Mariho fa ireo antontan-kevitra dia ampiasaina araka ny fepetra voalazan'ny Fitsipika (EU) 2016 / 679 ny Parlemanta Eoropeana sy ny Filankevitry ny 27 Aprily 2016 momba ny fiarovana ny olona momba ny fanodinana ny tahirin-kevitra manokana ary ny fandefasana maimaim-poana ireo angona ireo.
1.- Tanjon'ny fitsaboana: Izany dia ny mitazona fifandraisana ara-barotra miaraka amin'ny mpampiasa ity tranonkala ity. Mba hanatanterahana ny fitsaboana, ny tetikasa kasaina hatao dia:
.- Ny baikon'ny fangatahana, fangatahana na karazana fangatahana rehetra ataon'ny mpampiasa amin'ny alalan'ireo endriky ny fifandraisana izay vita.
.- Fandefasana fifandraisana ara-barotra momba ny dokambarotra mifandraika amin'ny vokatra sy ny serivisy amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika na fitaovana, ankehitriny na ho avy, izay ahafahan'ny serasera fifandraisana.
2.- Conservation of data: Ho voatazona izy ireo raha mbola misy fifandraisana miray amin'ny fihazonana ny faran'ny fitsaboana. Rehefa tsy ilaina intsony izy ireo amin'izany tanjona izany, dia hofoanana amin'ny fepetra fiarovana azo antoka izy ireo mba hiantohana ny fandringanana tanteraka azy ireo.
3.- Fifandraisana amin'ny angona: Ny mpampiasa dia manampy amin'ny alàlan'ny zo hisarihana, fanitsiana, fanesorana, fanoherana ary fampiharana ny angon-dry zareo. Tahaka ny zo hitondrana fitarainana miaraka amin'ny manampahefana mpanara-maso, www.agpd.e​ s , raha heveriny fa tsy mifanaraka amin'ny fitsipika amin'izao fotoana izao ny fitsaboana.
Mba hampihatra ny zony dia tsy maintsy mandefa ID na pasipaoro ny mpampiasa:
Torres Bus SL, miaraka amin'ny CIF B45275922, miaraka amin'ny adiresy C / Polideportivo, 2. 45410 Villanueva de Bogas (Toledo) ary mandefa mailaka atorres@torresbus.es
4.- Ny toetra mandrindra ny fampahalalana nomen'ny mpampiasa: Ireo mpampiasa amin'ny fanaraha-maso ilay boaty mifanaraka aminy, manaiky am-panajana sy manaiky ary manaiky fa ny antontan-taratasiny dia ilaina mba hihaona amin'ny fangatahan'ny mpamatsy. Ny mpampiasa dia miantoka fa ny fahazoan-dàlana manokana omena dia fahamarinana ary tompon'andraikitra amin'ny fampitana ny fanovàna azy.
Bus Torres SL mampahafantatra mazava sy manome toky ireo mpampiasa fa ny angon-drakitra manokana dia tsy ho nampahafantatra na inona na inona toe-javatra ny antoko fahatelo, ary raha misy famindrana ny angon-drakitra manokana, mametraka ny fanekena mazava nanontany teo aloha, ary misy ahiahy baovao ny mpampiasa .
Nangataka fanazavana rehetra ny aterineto amin'ny alalan'ny asa fanompoana dia tsy maintsy, araka izay ilaina ho amin'ny fanompoana, raha ny angon-drakitra rehetra tsy voalaza, tsy misy antoka fa ny vaovao sy manome tolotra ny Vaomiera, dia nanitsy tena amin'ny zavatra ilainao.
Fiarovana ara-tsosialy: Araka ny fepetra voalazan'ny ny lalàna amin'izao fotoana izao mikasika ny fiarovana ny tahirin-kevitra manokana, ny mpanome dia mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny lalàna ny amin'ny fanodinana ny tahirin-kevitra manokana sy ny toro lalana voafaritra ao amin'ny andininy faha-5 ny RGPD.
Izany dia azo antoka fa ampiharina ara-teknika sy ny fandaminana politika mety ho fampiharana ny fepetra napetraky ny RGPD mba hiarovana ny zo sy ny fahalalahan'ny mpampiasa ka nambarako azy ireo ho amin'ny ankavanana, vaovao mba hahafahany hampiasa azy ireo.